I Milton Obote tamin'ny taona 1960
I Apollo Miltone Obote dia mpitondra fanjakana angandey izay filoham-pirenen' i Oganda tamin' ny taona 1966 hatramin' ny 1971 sy tamin' ny taona 1980 hatramin' ny 1985, teraka tamin' ny 25 Desambra 1925 tao Akoroko ary maty tamin' ny 10 Oktobra 2005. Izy no heverina ho rain'ny fahaleovan-tenan' i Oganda.
1 Fanoherana ny fanjanahan-tany
2 Piraiminisitra voalohany tamin'ny fahaleovan-tena
3 Voaongana indroa
Fanoherana ny fanjanahan-tany[hanova | hanova ny fango]
Tao amin' ny faritra avaratra ao Oganda no nahaterahan' i Apollo Milton Obote, raha mbola teo ambany fiarovan' i Britaina Lehibe ny firenena tamin' izany. Zanaky ny lehibem-poko langô izy. Nianatra tao amin' ny oniversiten' i Makéré izy. Tao amin' ity oniversite ity no niofananan' ireo mpitaky fahaleovan-tena afrikana maro. Nankany Kenia izy tamin' ny taona 1950 ka nandray anjara tamin' ny hetsika ara-politika nanoherana ny fanjanahan-tany ary niara-nanorina tamin' i Jomo Kenyatta ny Kenyan African National Union (Kanu) tamin' ny taona 1960.
Niverina tany Oganda izy tamin' ny taona 1957 ary lany tao amin' ny Filan-kevitra mpanao lalàna tamin' ny taona 1958 ary nanangana ny Uganda People’s Congress (UPC) izy tamin'ny taona 1961.
Piraiminisitra voalohany tamin'ny fahaleovan-tena[hanova | hanova ny fango]
Rehefa nahazo fahaleovan-tena i Oganda tamin' ny taona 1962, nefa nijanona tao amin' ny Commonwealth, dia voatendry ho piraiminisitra i Apollo Milton Obote (1962-1971). Ny mpanjaka (kabaka) Mutesa II, izay mpanjakan' ny fanjakan' i Boganda (Buganda) tao amin' ny faritra atsimo, no lasa sady filoha no mpanjaka tamin' izany. Nanongana an' i Mutesa II tamin' ny taona 1966 i Apollo Milton Obote mba hanafoanany ny fanjakazakana ara-toekarena sy ara-pôlitikan' i Boganda, nanampy azy tamin' izany ny lehiben' ny etamazôro Idi Amin Dada. Nisesy tany ilay mpanjaka. Nofoanan' i Apollo Milton Obote ny fanjakàm-panjaka sady nanambara ny tenany ho filoham-pirenena izy. Nanitsakitsaka ny lalam-panorenana izy sady tsy nampihatra ny federalisma voarakitra tao amin' izany lalàm-panorenana izany.
Voaongana indroa[hanova | hanova ny fango]
Nanorina fitondram-panjakana aananan' ny filoham-pirenena fahefana lehibe niaraka amin' ny antoko tokana i Apollo Milton Obote sady nandray ny firehana sosialista. Nomeny vahana ny fahefan' ny pôlisy izay nanampatra fahefana sady nampanjaka ny herisetra. Tamin' ny taona 1971, raha tsy teo an-toerana i Apollo Milton Obote fa tany Singapora namonjy ny fivorian' ny Commonwealth, dia nandrombaka ny fitondrana i Idi Amin Dada. Nanohana an' ity farany i Etazonia sy i Britaina Lehibe nefa fitondram-panjakana miantehitra amin' ny fampitahorana no natsangany.
Nisesy tany tany Tanzania i Apollo Milton Obote ary tsy niverina tao Oganda raha tsy tamin' ny taona 1979 tamin' ny nahavoaongana koa an' i Idi Amin Dada. Nahazo fandresena tamin' ny fifidianana rehetra tao Oganda ny antoko UPC ka voafidy ho filoham-pirenena i Apollo Milton Obote tamin' ny taona 1980. Izany fifidianana nahalany azy izany dia nanjakan'ny hosoka. Didy jadona sy fianteherana amin' ny herisetra ihany koa anefa no nentiny nitondra ny firenena, ka nanohitra izay ny Baganda (vahoaka ao Bonganda) izay nivondrona tao amin' ny National Army Resistance (NRA) notarihin' i Yoweri Museveni. Nandritra ny fe-potoam-pitondran' i Apollo Milton Obote faharoa dia olona eo anelanelan'ny 200 000 sy 300 000 no maty tamin' ny ady anaty akata nifanaovan' ny fitondram-panjakana sy ny NRA (tao atsimo) niaraka tamin' ireo miaramila mpomba an' i Idi Amin Dada (tao avaratra). Tsy nampiditra tao amin' ny fitondrana afa-tsy olona avy amin' ny foko misy azy i Apollo Milton Obote sady nanararaotra ny disadisa teo amin' ireo foko ao Oganda.
Naongan' i Tito Okello izay jeneraly lehiben' ny etamazôro (nampian' ny brigadie Olara Okelo) i Apollo Milton Obote tamin' ny taona 1985 ka nialokaloka tany Zambia mandra-pahafatiny. Tsy nahatohitra ny ady anaty anaty akata notarihin' i Yoweri Museveni izany fitondran' ny miaramila izany ka niakatra ho filoham-pirenena ity lehiben' ny mpioko ity tamin' ny taona 1986.
Nanana olana amin' ny taovam-pisefoana i Apollo Milton Obote ka naiditra trano fitsaboana tany Afrika Atsimo ary maty tany tamin' ny 10 Oktobra 2005 tamin' ny faha-80 taonany. Na dia tsy nankasitrahin' ny filoha Yoweri Museveni aza i Apollo Milton Obote dia nandevina sy nisaona azy ny firenena noho izy rain' ny fahaleovan-tenan' i Oganda.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Milton_Obote&oldid=998378"
Voaova farany tamin'ny 3 Novambra 2020 amin'ny 18:06 ity pejy ity.